कोरोना संकटले झन् बढ्यो आत्महत्या ! - नेपालबहस
कोरोना संकटले झन् बढ्यो आत्महत्या !
♦ गोपाल ढकाल, मनोविद
काठमाडौं । आत्महत्या विश्वव्यापी रुपमा नै जटिल समस्या बन्दै गएको छ । आत्महत्या रोकथाम तथा यस बिषयमा जनचेतना बढाउने उदेश्यले प्रत्येक बर्ष १० सेप्टेम्बरका दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदै आएको छ । यस बर्ष पनि यो दिवसको नारा ‘आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य’ रहेको छ ।
यस बर्ष कोरोनाको संकट र लकडाउनले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जस्ता सबै पाटोलाई असर पुर्याएको छ । यसले सबै तह, तप्का, उमेर र समुदायका व्यक्तिलाई प्रभाव पारेको छ। यस संकटपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ ।
आत्महत्याको अवस्था भयावह हुँदै भन्ने जस्ता समचार पनि आइरहेका छन् । आत्महत्यालाई कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ। तर आत्महत्या अहिलेको मात्र समस्या भने होइन । नेपालमा पनि आत्महत्या पहिलेदेखि नै जनस्वास्थ्यको एउटा ठुलो समस्या र चुनौतिका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । नेपालमा आत्महत्या गर्नेको दर प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार यस बर्ष आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेहरुको कुल संख्या ६ हजार २७९ रहेको छ । यसरी हेर्दा दैनिक १७ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ हजार ७५४ जना नेपालीले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए। जुन सरदर दैनिक १६ जना पर्न आउँछ ।
प्राकृतिक विपत्त पर्दा, रोगव्याधी फैलिदा जस्ता असहज र जोखिमपुर्ण अवस्थामा मानसिक रोग तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम भने हुन्छ । त्यसैले आत्महत्या लकडाउनपछिको मात्र समस्या हो, लकडाउनपछि भयावह भएको छ, पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको लकडाउनभन्दा पहिले र लकडाउनपछिको तुलना गर्ने हो भने खासै फरक देखिदैन। तर बढदै जाने संकेतहरु भने देखा पर्न थालेका छन् । बालबालिकामा भने यसबीचमा आत्महत्या गर्ने दर बढेर गएको देखिन्छ। जुन दुखद हो । आत्महत्या एकदमै संवेदनशिल विषय हो ।
आत्महत्याको समचारलाई अतिरन्जित र सनसनी पुर्ण बनाउनु हुदैन । यसले समाजमा झनै नकारात्मक असर पुर्‍याउछ। डिप्रेसनमा रहेका र आत्महत्याको सोच बनाएकाहरुमा आत्महत्या गर्ने आँट बढ्छ । बालबालिकाहरुले त्यसको सिको गर्न सक्छन् ।
आत्महत्या नेपालको मात्र समस्या पनि होइन । यो विश्वकै साझा समस्या हो । विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्माहत्या गर्छ भने प्रत्येक ३ सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछ ।
एक आत्महत्या हुँदा पच्चिस व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरिसकेका हुन्छन् र धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न गम्भिर रूपमा सोचेका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष बिश्वमा सरदर ८ देखि १० लाख व्यक्तिले आत्महत्याबाट आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेका छन ।
यो संख्या युद्ध, दैवी प्रकोप, सडक दुर्घटना, महामारी लगायतका कारणहरूबाट हुने मृत्यु भन्दा धेरै हो । विश्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरुले बढी आत्माहत्या गर्ने गर्छन । तर आत्महत्याको प्रयास भने पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ ।
प्रायः सबै मानिस दीर्घजीवन चाहन्छन् । मर्नदेखि सबैलाई डर लाग्छ । तर किन कोही व्यक्ति आत्महत्या गरेर आफ्नो जिवन आफै समाप्त पार्न खोज्छन ? आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको बेला पक्कै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनका सबै ढोकाहरू बन्द भएको देख्छ होला । मर्नु बाहेक अरु कुनै पनि विकल्पहरू भेट्दैन होला । उ चरम निराशामा डुबेको हुनसक्छ ।
आत्महत्या पछाडीका कारण
आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । आत्महत्याको ९० प्रतिशत कारण भने मानसिक रोग नै भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि डिप्रेसन मुख्य हो । क्षणिक आवेगमा आएर निर्णय लिने क्षमता गुमाउदा वा अत्याधिक जाँड, रक्सी, लागु पदार्थको सेवन तथा कडाखालका मानसिक रोग लागेर पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्न सक्छ ।
व्यक्तिले आत्महत्या आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरीका कारण गर्ने नभएर आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा अन्य जोखिमका तत्त्वहरूको संयुक्त प्रभावका कारण हुने गर्दछ । धेरै जस्तो केशमा आत्महत्याको प्रयास वा आत्महत्यालाई मानसिक रोगको एउटा लक्षणको रूपमा लिनुपर्दछ ।
जसरी कुनै कुनै शारीरिक रोगमा केही व्यक्तिहरु उच्च जोखिमा हुन्छ । त्यसैगरी केही व्यक्तिहरु मानसिक रोग र आत्महत्याको हिसाबले केहि उच्च जोखिममा हुन सक्छन । जस्तो मानसिक रोग डिप्रेसनमा रहेको, कुनै दुखद घटनाले धेरै प्रभावित, पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको, तनावपूर्ण पेशामा भएकाहरु, पारिवारिक झै–झगडा, आर्थिक संकट भएका, बेरोजगार, लागु पदार्थ कुलतमा फसेका आदि ।
मानसिक रोग जोसुकैलाई लाग्न सक्दछ । मानसिक रोग र आत्महत्यालाई हाम्रो समाजले फरक रुपमा लिन्छ । फरक तरिकाले बुझ्छ । मानसिक रोगलाई पूर्व जन्मको पाप र अपराध ठान्छ । देवी देवता कुल देवता बिग्रेको भन्छ । आत्महत्या गर्नेलाई समाजले पानी मरुवा, लाछीको उपमा दिन्छ ।
आत्महत्या गर्नु अगाडीका लक्षण
“हरपल मरीमरी बाँच्नु भन्दा त एकैपलमा मर्न, मन लाग्न सक्छ, त्यही पललाई केही बेर त सहेर हेर, फेरि पनि बाँच्ने इच्छा जाग्न सक्छ” सत्य र स्वरूपराज आचार्यले गाएको गीतले भनेझै दुःख र निरासाको क्षणलाई धैर्य गरेर केहीबेर पर्खने हो भने त्यो पल बितेर जान्छ र आफ्नो आत्महत्याको सोच, निर्णय र विचारमा परिवर्तन आउन सक्छ ।
त्यो थोरै समयमा आफूले गरेको धैर्यता र अरुबाट प्राप्त सहयोगले जीवन जोगिन सक्छ । तपाईले कसैलाई गर्नु भएको एक मिनेटको सहयोग वा तपाईको एक मिनेटको धैर्यता जीवन परिवर्तनका लागि पर्याप्त हुन सक्छ । संसार हिजो पनि सुन्दर थियो । आज पनि सुन्दर छ र भोलि पनि सुन्दर नै रहने छ ।
मात्र जीवनको घटनाक्रमले यो सुन्दर संसारमा तुवालो लागेको जस्तो मात्र भएको हो । धैर्य गरियो भने एक दिन त्यो तुवालो फाट्छ नै । जीवन परिवर्तनका लागि एक मिनेट नै पर्याप्त छ । जीवन रहे आफूले गरेको सबै गल्तीहरू सच्याउन सकिन्छ । गल्तीको प्रायश्चित गर्न सकिन्छ ।
तर आफ्नो अस्तित्व नै नास भएपछि आफूले गरेको अमूल्य जीवन त्याग्ने भुललाई प्रायश्चित गर्ने मौका समेत पाइँदैन । आत्महत्या समस्याको समाधान हुँदै होइन र आत्महत्यालाई धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा उसले बेलैमा घरपरिवार, साथीसंगी वा विशेषज्ञको सहयोग पाएमा आत्महत्याको उसको सोच वा प्रयासलाई रोक्न सकिन्छ । खतराको सूचक, जोखिम र सुरक्षाका तत्त्व, स्व हेरचाह आदिको जानकारी भएमा आत्महत्यालाई रोकथाम गरी प्रत्येक जीवनलाई बचाउन सकिन्छ । यसका लागि हामी सबैको थोरै समय र सहकार्यले मात्र पनि धेरै ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्दछ ।
यदि तपाईहरुमध्ये कसैर्ला पनि कुनै किसिमको मानसिक समस्या, आत्महत्याको सोच वा प्रयास जस्ता समस्या भएमा ९८१३५२७७३२ नम्बरमा फोन गरेर मनोपरामर्श सेवा लिन सक्नु हुनेछ ।
७ महिनापछि खुल्यो आन्तरिक उडान ३ दिन पहिले
धनुषामा संक्रमित दुई जनाको मृत्यु ६ दिन पहिले
नेपालमा एकैदिन संक्रमितको संख्या २०२० पुग्यो ६ दिन पहिले
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमै ७ जना पत्रकारलाई कोरोना पुष्टि ७ दिन पहिले
घर बिदा मनाएर फर्केका २८ सैनिकलाई कोरोना पुष्टि ७ दिन पहिले
एकै दिन विभिन्न मुद्धामा फरार १४ अभियुक्त पक्राउ ५ मिनेट पहिले
बुटवलमा कपिलवस्तुकी संक्रमितको मृत्यु २४ मिनेट पहिले
दाङमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो, दुई महिनामा २६५ दर्ता २९ मिनेट पहिले
सुरक्षा घेरामा संविधान दिवस मनाउने ओलीको बोलीमा सुशासन, व्यवहारमा कुशासन ४३ मिनेट पहिले
आज नेप्से झिनो अङ्कले उकालो, ५ उपसमूहको शेयर ओरालो ४८ मिनेट पहिले
ग्लोबल आइएमई बैंकले होटल व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने ५४ मिनेट पहिले
वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिदको छानबिन विवरण दिन लेखा समितिको पत्र ५७ मिनेट पहिले